.: Ko Moe's Electronics Notes :.: March 2008
Torrents တွေကိုသုံးပြီး အင်တာနက်ကနေ Software တွေကို Download လုပ်တဲ့အခါ .ISO ဆိုတဲ့ Extension နဲ့ ဖိုင်လေးတစ်ခုပဲ ရလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကတကယ်တော့ CD/ DVD တစ်ခုလုံးကို Package လိုက် Download လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ သူ့ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုရင် Magic ISO ဆိုတဲ့ Software လိုပါတယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း File ဖွင့်ပြီး Extract လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒါမှ Install လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ CD/ DVD အဖြစ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ ဖိုင်လေးကို တန်းပြီး Burn လိုက်လို့ရပါတယ်။ Unregistered ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Extract အရင် လုပ်ပြီးမှ Burn လိုက်တာကောင်းပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, March 26, 2008 No comments:
Thermal Head (NEC 515 MCU) Software Files
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး NEC 515 MCU နဲ့ရေးထားတဲ့ Software လေးကို မေ့သွားမှာစိုးလို့ တင်ထားတာပါ။
ThermalHead Main Program
Mecha2Arm Program
Mecha3Arm Program
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, March 25, 2008 No comments:
Labels: Programming, Project, Software
Electronics E-Books -6(Wireless Communication)
Wireless Communication နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့စာအုပ်တွေပါ။ Wireless Technologies တွေဖြစ်တဲ့ GSM, CDMA, RFID, …. (Hardware, Software, Data Communication) တွေအကြောင်းပါပါတယ်။ လက်တွေ့သုံးလို့မရသေးတောင် သ်ိမ်းထားဖို့၊ လေ့လာလို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Wireless Communication Systems Prentice Hall
Wireless Data Demystified McGraw Hill eBook
Wireless Data Technologies Reference Handbook (John Wiley and Sons)
Wireless Internet Telecommunications Artech House Publishers eBook
Wireless Foresight Scenarios of the Mobile World in 2015 (John Wiley and Sons)
Wireless Mobile Networking with ANSI Second.Edition
Wireless Networks First Step 2005
Wireless Optical Communication Systems Springer Verlag Telos Sep 2004
The Wireless Data Handbook Fourth Edition
Posted by ကိုမိုး at Monday, March 24, 2008 1 comment:
Labels: Books, DSP, Wireless
Electronics E-Books -5(Electronics for Dummies)
Dummy စာအုပ်လေးတွေက အခြေခံလေ့လာသူတွေ အတွက်ကော အဆင့်မြင့်လေ့လာသူတွေ အတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထူးသဖြင့်တော့ ကွန်ပျူတာသမားတွေ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Dummy စာအုပ်လေးတွေတော်တော်များများကို သုံးပြီး လေ့လာပါတယ်။ ဒီ စာအုပ်က Electronics အတွက်ပါ။
“နောက်ထပ် Dummies စာအုပ် (.PDF format) ၁၃၅ အုပ်ကို စပြီး Download လုပ်နေပါပြီ။ ပြီးရင် အကုန်လုံးကို ပြန်တင်ပေးပါမယ်။”
Electronics for Dummies (John Wiley and Sons eBook)
Posted by ကိုမိုး at Friday, March 21, 2008 No comments:
Electronics E-Books -4(Circuit for Hobbyist)
ဒီစာအုပ်က Electronics Major ကျောင်းသားတွေအတွက် Project လေးတွေလုပ်လို့ရတဲ့ စာအုပ်ပါ။ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, March 19, 2008 No comments:
Electronics E-Books –3(Complete PCB design using OrCAD Capture & Layout)
OrCAD ကိုကျွန်တော် အစပဲသုံးတတ်တာ။ အဲဒါကြောင့်ဆက်မရေးဖြစ်တော့တာ။ ဟိုတလောက ဒီစာအုပ်လေးရလိုက်တယ်။ သူ့ထဲမှာ OrCAD နဲ့ PCB design ဆွဲပုံအဆင့်ဆင့်ကို သေသေချာချာရှင်းပြထားတာ တွေ့လိုက်တော့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အသုံးဝင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒါလေးဖတ်ပြီးဆက်လုပ်ရဦးမှာပါ။
Complete PCB design using OrCAD Capture & Layout
Labels: Books, Hardware, OrCAD
Electronics E-Books –2(Electronics Hobbyists)
ဒီစာအုပ်တွေက .DJVU ဆိုတဲ့ Extension နဲ့ပါ။ Universal Document Converter ဆိုတဲ့ Software နဲ့ .PDF ဖိုင်အဖြစ် convert လုပ်ပေးရပါတယ်။ Converter Software ကိုလည်း ကျွန်တော်တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Electronics for Hobbyists - 1
Electronics for Hobbyists - 2
Electronics for Hobbyists - 3
Electronics for Hobbyists - 4
Electronics for Hobbyists - 5
Electronics for Hobbyists - 6
Electronics for Hobbyists – 7
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, March 18, 2008 No comments:
Electronics E-Books – 1 (Basic Electronics Hardware)
တစ်လောက ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ E-Books Torrent တွေထဲကို လိုက်မွှေရင်း Electronics E-Book ၅၀၀ လောက်ရလိုက်တယ်။ အားလုံးပေါင်3းGigaBytes လောက်ရှိတယ်။ Category စုံနေတာပဲ။ အဲဒါတွေကို အမျိုးအစားခွဲပြီး တစ်ဖြေးဖြေးချင်း တင်ပေးပါမယ်။ စာအုပ်လည်း ရှာလို့မတွေ့၊ တွေ့တော့လည်း မ၀ယ်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော့လို လူတွေအတွက်တော့ E-Book ကကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ စာအုပ်ထဲမှာ လိုက်ရှာရတာလည်း ပျင်းတယ်လေ။ E-Book ဆိုတော့ Search နဲ့ရှာရုံပဲ။ အခုတင်ထားတာတွေက အခြေခံ Electronics Hardware တွေအကြောင်းပါ။
လိုချင်တဲ့ စာအုပ်ရှိရင်လည်း ခေါင်းစဉ်ပြောလိုက်ပါ ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိရင် မျှဝေပေးပါ့မယ်။
Basic Electronics Components Hardware - I.CFS
Basic Electronics Components Hardware - II.CFS
LabView basic Tutorials
LabView programming ကိုအခြေခံကစပြီး လေ့လာချင်သူတွေအတွက်ပါ သူ့ရဲ့ Interfaces, Tools တွေကစပြီး Excel file Read/Write အထိကို အဆင့်ဆင့်ရှင်းလင်း သင်ကြားပေးထားတဲ့ Tutorial လေးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် LabView 6.0 နဲ့ ရှင်းထားတာဖြစ်လို့ တစ်ချို့ Icon, Label လေးတွေမှာ အပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးနီးပါးတော့တူပါတယ်။ တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ Tutorial လေးတွေပါ။
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, March 11, 2008 1 comment:
Labels: LabVIEW, Programming
Electronics E-Books –3(Complete PCB design using...
Electronics E-Books – 1 (Basic Electronics Hardwar...